အ | Androidsis ပါ
Francisco Ruiz | | Android ထုတ်ကုန်များ, မိုဘိုင်း, reviews
စမ်းသပ်သုံးရက်ပြီးနောက် Elephone A4Androidsis စာဖတ်သူများအတွက်အထူးသီးသန့်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုတွင်ယူရို ၁၀၀ အောက်သာရနိုင်သည် အဓိကဇာတ်ကောင်များဖြစ်သော Elehone A4 ရှိသည့် terminal ကိုအပြည့်အဝခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည် သင်က၎င်း၏အစစ်အမှန်စစ်ဆင်ရေးကိုတွေ့မြင်နိုင်အောင်ကျနော်တို့ foreground အတွက်စမ်းသပ်ပြီး။
terminal ကို၏ကောင်းကျိုးကိုထင်ဟပ်ဖော်ပြရန်လှပသောရိုက်ချက်များဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာကိုအမြဲထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ် caramelize ပြုလုပ်ရန်မလိုချင်သောကြောင့်ယင်းတို့၏အကြောင်းပြချက်နှင့်အကြောင်းပြချက် ငါ foreground နှင့်အစစ်အမှန်အချိန်အတွက် terminal ကိုစမ်းသပ်ထားတဲ့အတွက်ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ၎င်းတွင်၎င်း၏အားသာချက်နှစ်ခုလုံးကိုငါပြောပြသည်။ အထူးသဖြင့်အားနည်းချက်များအားအလေးပေးဖော်ပြရန်၊ အကယ်၍ သင်ကဤပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေပါကဤအီလက်ထရွန်နစ် A4 မှကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောအရာအားလုံးကိုသင်အမှန်တကယ်စိတ်ကူးရှိစေရန်အထူးအလေးထားသည်။ ဒီဆိပ်ကမ်းတရုတ်မူရင်း Android ။
1 Elephone A4 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
2 Elephone A4 ရဲ့အကောင်းဆုံး
3 Elephone A4 ကင်မရာများကိုစစ်ဆေးပါ။
4 အဆိုးဆုံး Elephone A4
Elephone A4 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
operating system စိတ်ကြိုက်အလွှာမရှိပဲ Android 8.1 Oreo
ဖန်သားပြင် ၅.၈၅ လက်မ IPS HD + 5.85: 19 အချိုး
Processor ကို ၁.၅ Ghz နှုန်းဖြင့် 6739 Bit Quad Core နည်းပညာဖြင့် Mediatek MT64WW
GPU ကို IMG 8XE 1PPC 600 MHz
ရမ်3GB ကို LPDDR3
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 16Gb အထိ microSD မှ 128 Gb အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်
နောက်ကင်မရာ Flash MPED နှင့် FullHD ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားသော 8 mpx
ရှေ့ကင်မရာ HD ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အတူ5mpx
ဆက်သွယ်မှု Dual SIM NanoSIM + NanoSIM သို့မဟုတ် NanoSIM + MicroSD / 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 (1900/1800/850/900) / 3G: WCDMA B1 / B5 / B8 (2100/850/900) / 4G: FDD- LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B20 (2100/1800/850/2600/800) / TDD-LTE B38 / B40 / B41 (2600/2300/2500) / Wifi Dual Band 2.4 နှင့်5Ghz / Bluetooth 4.2 / GPS နှင့် aGPS GLONASS / OTG / OTA နှင့် FM ရေဒီယိုတို့ဖြစ်သည်
အခြားအင်္ဂါရပ်များ ဘေးဘက်ရှိ Face Fingerprint Reader / မျက်နှာသော့ဖွင့်ခြင်း / သတ္တုအပြီးသတ်ဖန်ခွက်ဖြင့်အပြီးသတ် / ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးထိရောက်သောကိုယ်ဟန်အမူအရာထိန်းချုပ်မှု / Compass နှင့်ဆွဲငင်အားအလင်းအာရုံခံကိရိယာများနှင့် accelerometer / အတွက်လမ်းညွှန်ဘားကိုဖျောက်ထားနိုင်သည်။
ရှုထောင့် 150.4 72.8 8 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 189 ဂရမ်
စြေး 96.78 ယူရိုကနေ 105 ယူရိုအထိ en Banggood
Elephone A4 ရဲ့အကောင်းဆုံး
ဒီ Elephone A4 ကိုကျွန်ုပ်တို့အလေးအနက်ထားပြောကြားနိုင်ခြင်းမှာလှပပြီးကြော့ရှင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်အပြီးသတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သတ္တုကိုယ်ထည်ဖြင့်ကွေးသောထောင့်များပါ ၀ င်သည့် terminal တစ်ခုရှိသည်။ နောက်ဘက်အံ့မခန်း glazed ဒါမှမဟုတ် ၅.၈၅ လက်မအချင်းရှိဖန်သားပြင်ဟာကြီးမားတဲ့ Notch ကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ဖို့ကျနော်တို့ရင်ဆိုင်ရမှာပါ ဒီစျေးနှုန်းအကွာအဝေးကိုယူရို ၁၀၀ အောက်လောက်မှာကျွန်တော်စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့တာကတော့လှပတဲ့စမတ်ဖုန်းတွေထဲကတစ်ခုပါ.
ဒီ Elephone A4 နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလေးပေးဖော်ပြနိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ဆက်ပြီး၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်နဲ့ပြုပြင်ထားတဲ့စျေးနှုန်းအပြင်၊ သင်က Notch နဲ့ terminal ကိုကြိုက်ရင်ရှေ့ကင်မရာပါ ၀ င်ပြီးသာမန်အားဖြင့်မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်မှာရှိတဲ့မျက်ခုံးမျိုးကိုပြောရင်၊ ရှေ့စပီကာ၊ သင်သည်ဤ Elephone A4 ၏ HD + resolution ဖြင့်မျက်နှာပြင်ကိုနှစ်သက်မည်.
နှစ်ခုလုံးအတွက်တစ် ဦး ကမျက်နှာပြင် အနိမ့်ဆုံးတောက်ပမှုအဖြစ်အမြင့်ဆုံးတောက်ပမှုသည်မှန်ကန်ဆုံးဖြစ်သည် မျက်လုံး၏ပုံရိပ်ကိုလောင်ကျွမ်းစရာမလိုဘဲနေရောင်ခြည်အပြည့်တွင်သို့မဟုတ်မှိန်မှိန်နေသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပြproblemsနာမရှိဘဲအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်၎င်း၏ user interface နှင့် Android version သို့သွားပါက terminal တစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသည် Android Oreo 8.1 လုံးလုံးလျားလျား, သောတစ်ခုတည်းသောအပြောင်းအလဲများသို့မဟုတ်ပွောငျးလဲပိုကောင်းဘို့လုပ်သော။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင် Launcher တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအလုပ်လုပ်သော်လည်း၎င်းသည် terminal ကိုတတ်နိုင်သလောက်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ရွေ့လျားစေသည်၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ဘက်ထရီကိုအပိုထပ်ဆောင်းရန် Dura Sped လုပ်ဆောင်ချက်ကိုထည့်ပါက နောက်ပြီး setting ထဲကိုထည့်နိုင်တဲ့ခလုတ်ရဲ့အောက်မှာထည့်သွင်းနိုင်တယ် virtual ခလုတ်များသို့မဟုတ် navigation bar ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာအတိုင်းညှိလိုက်ပါကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောဒီဇိုင်းများအကြားတွင်ရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိရောက်သောအမူအယာထိန်းချုပ်မှုဖြင့် terminal ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်၎င်းကိုအပြီးတိုင်ဖုံးကွယ်ထားခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Android ၏ဤအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုနှင့်အတူ terminal ကိုသုံးစွဲဖို့နိုင်ခြင်း NFC ဆက်သွယ်မှုသာပျောက်ဆုံးနေသည့်၎င်း၏ပေါင်းစည်းဆက်သွယ်မှုမှလွဲ။ ဤ Elephone A4 နှင့် ပတ်သက်၍ မီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည့်အခြားအချက်တစ်ခုမှာ၊ ၄ င်း၏ built-in 3000 mAh ဘက်ထရီသည်ကျွန်ုပ်ကို ၅ နာရီခန့်တက်ကြွစွာမြင်ကွင်းပေးနေသည် အားလုံးဆက်သွယ်မှုအားလုံးအချိန်များတွင် enabled နှင့်အော်တို mode မှာတောက်ပ။
ပုံမှန် Android အသုံးပြုသူအတွက်မိမိ၏ terminal ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအသုံးပြုသောသူကသူ့ကိုပေးလိမ့်မည် အားသွင်းစရာမလိုဘဲနှစ်ရက်ကြာ.
ကျွန်တော်ဒီ Elephone A4 အကြောင်းနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ဘဝမှာဒီစျေးနှုန်းအကွာအဝေးရှိ terminal ကိုကျွန်တော့်ကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာပါ။၎င်းတွင်ကင်မရာများပါ ၀ င်သည်, အမှန်တရားကြောင်းရှေ့နှင့်နောက်ကျောနှစ် ဦး စလုံး သူတို့ဟာအိမ်ပြင်မှာတောင်ကောင်းကောင်းနေနိုင်ရင်တောင်မှအိမ်တွင်းမှာတောင်ရလဒ်ကောင်းတွေရနိုင်ပါတယ်။.
၎င်းတွင်မည်သည့်ဗီဒီယိုတည်ငြိမ်မှုမျိုးမှမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကပုံသေလေယာဉ်များနှင့်သို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများရုတ်တရက်မရသည့်ဗီဒီယိုများပြုလုပ်လျှင်၎င်းသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးဖြင့်ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်လည်းဖြစ်သည်။ ငါပထမတော့ရှာတွေ့လိမ့်မယ်လို့ထင်ထားတာထက်အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ကင်မရာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်.
ဒီစျေးနှုန်းအကွာအဝေးကိုယူရို ၁၀၀ မပြည့်သောအခြားတရုတ်ဆိပ်ကမ်းများနှိုင်းယှဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ထဲထားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အမြဲပြောနိုင်ပါတယ်။
HD + ပြသမှု
အလွန်အကျိုးရှိစွာ Processor ကို
Elephone A4 ကင်မရာများစမ်းသပ်ခြင်း (အသံနှင့်ဗီဒီယိုကိုကြိုးကိုင်စရာမလိုဘဲ)
အဆိုးဆုံး Elephone A4
Terminal ကိုသုံးရက်ကြာသုံးပြီးသုံးရက်အကြာမှာငါပြောနိုင်ပါပြီ terminal ၏ဘေးထွက်အပေါ်လက်ဗွေဖတ်စက်အထူးသဖြင့်ဒီဟာကိုသုံးရန်အလွန်မသက်မသာဖြစ်ခြင်းအပြင်၊ ဒါကတစ် ဦး Fairground ShotGun ထက်ပိုပျက်ကွက်အထူးသဖြင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာ terminal ကိုနှိုးထသောအခါ။
ကျွန်တော်ဒါကိုထည့်မယ် Face Unlock သည်စျေးကွက်ထဲတွင်အမြန်ဆုံးမဟုတ်ပါ ၎င်းသည်အလင်းကောင်းရရန်အတွက်အချို့သောအခြေအနေများလိုအပ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရင်ကကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအကြိမ်များစွာ (သို့) သော့ဖွင့်ခြင်းစကားဝှက်၊ PIN နံပါတ်သို့မဟုတ်သော့ဖွင့်ခြင်းပုံစံများကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အလယ်ပိုင်းတွင်အနှုတ်လက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည် ကိရိယာ၏အောက်ခြေရှိ built-in စပီကာမှအသံအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသည်, နှင့်ငါတစ်ဝက်ကိုပြောပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကစွမ်းအားထက်ပိုပြီးစွမ်းဆောင်နိုင်ပေမယ့်သတိပေးမှုတွေကိုလက်လွတ်မသွားအောင်၊ ဆူညံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်မှမခေါ်မိစေချင်ဘူးဆိုရင်၊ ငါတို့လိုချင်တာကတေးဂီတကိုနားထောင်ဖို့၊ အင်တာနက်ပေါ်မှာဗွီဒီယိုကြည့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့ကတည်းကကောင်းသောနားကြပ်လိုအပ်သွားလျှင် အပြည့်အဝစည်သွတ်နှင့်စက်ရုပ်အသံထဲမှာစပီကာထဲကလာမယ့်အသံ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » သုံးသပ်ချက် Elephone A4 သည်ယူရို ၁၀၀ အောက်ရှိသော terminal တစ်ခုသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်